Faallo: Baarlamaanka iyo Khudbad Musharrax “Dhegayso ama ha dhegaysan!” – Kasmo Newspaper
Faallo: Baarlamaanka iyo Khudbad Musharrax “Dhegayso ama ha dhegaysan!”
Updated - February 3, 2017 10:33 am GMT
Afar iyo labaatan Musharrax ayaa soo doontay jago bannaan. Waa Madaxweynaha Soomaaliya oo, sida shaqayooyinka kale, u baahan qof ka bixi kara: xag aqoon, karti, hoggaamin, daacadnimo iyo geesinimo.
Mas’uulkaasi wuxuu hoggaankiisa imaanayaa dal caadi ahayn. Dal dagaal sokeeye wiiqay, kala qaybsan, faro-gelin shisheeye ku socoto, xoogag xag-jir ahina ka taliyaan meelo badan. Ciidamo Afrikaan ahi waxay u joogaan Nabad-ilaalin, kuwa dersikuna markay rabaan iyo meeshay doonaan ka soo gala.
Isla markaas waa dal ay malaayiin qof qarka u saaran tahay in ay ku hoobtaan abaarta iyo saboolnimada taagan. Iyadoo sidaas ah ayaa waxaa banaanaaday xafiiskii Madaxweynaha, waana in Madaxweyne la doorto.
Araaji qabasho ayaa bilaabatay, waxaana maamulaya guddi uu Guddoomiye u yahay Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Natiijada kala saariddu waa 8 Febraayo 2017, kulan Labada Aqal ee Baarlamaanka.
Hase ahaatee qofka soo doontay jagdaas, isagoo og masuuliyadda Mdaxweynaha Soomaaliya ee waqtigan; saddex arrimood midkood un buu noqon karayaa:-
1. In uu dhab ahaan rumeysan yahay in uu shaqadaas ka bixi karo, xag karti, hogaamin, hufnaan iyo aaminnimo.
2. In uu yahay qof ay ka tahay ‘Ha lagaa sheego iyo ismuujin’.
3. Iyo in uu yahay qof dhagareed, oo Madaxweynenimada uga faa’iideysan doona naftiisa, iyo haddii ay jiraan shisheeye gadaal ka taagan!
Hubaal, maaha hawl fudud kala xulidda dad tiradaas ah, oo hal shaqo soo wada doontay. Waxaana in la isweyddiiyo mudan sababta baarlamaanka waqtiga looga qaaday (2, 4 iyo 5 Febraayo) in ay dhegaystaan khudbado ay jeedinayaan musharraxiin 24 ah?
In warqad aad soo qoratay ama laguu soo qoray aad ka hor-akhrido fadhiga Baarlamaanka, ka dibna iska baxdo, iyadoon wax la weyddiin? Sow maaha indho-sarcaad, iyo dhegayso ama ha dhegaysan!?
Guddiga qaban-qaabinta doorashada Madaxweynaha waa in ay hubiyaan, xaqiijiyaan waqti ku filan in la helo, oo musharraxa wax lagu weyddiinayo.
Haddii kale waxay noqon doontaa nasiib-darro, marka la gaaro 8 Febraayo, iyadoon la soo imtixaamin musharraxiinta, oo aan bulshada fursad loo siin in ay wax weyddiiyaan u tartamahaha jagada Madaxweynaha.
Halistu waa weyn tahay in mar kale la caleemo-saarto qof aan qaadi karin masuuliyaddaas!